Shiinaha Pet Collagen warshad iyo alaab-qeybiyeyaal. Gelken
Waxyaabaha borotiinka ee xayawaanka rabaayada ah kolajka wuu sarreeyaa, oo borotiinka ayaa ka badan 85%, nafaqadiisu waa mid dhammaystiran. Waxay kakoobantahay in kabadan 18 nooc oo amino acids ah, waxayna kakoobantahay kalsiyum, fosfooraska, birta, manganese, selenium iyo macdano kale oo muhiim ah iyo walxaha raadraaca.
Nuugista iyo heerka beddelidda ee kolajka xayawaanka waa sida ugu sareysa 97.5%, waxayna leedahay wax lagu kariyo oo wanaagsan. Ka dib markaad isticmaasho, waxay kordhin kartaa heerka soo noqoshada quudinta waxayna yareyneysaa qiimaha quudinta si waafaqsan.
Kolajka xayawaanka waxaa iska leh borotiinka xayawaanka ee kolajka, oo leh saamaynta maqaarka iyo timaha. Haddii loo isticmaalo quudinta xayawaanka dhogorta leh, xariiqda hodanka ah iyo glycine waxay si weyn kor ugu qaadi kartaa muuqaalka dhogorta xayawaanka waxayna si cad u hagaajin kartaa darajada dhogorta.
Muuqaal Budada jaalaha ah ee khafiifka ah
Xallinta 2% cadeynta xalka aqueous
Barootiin,% (w / w) > 85
Dambas,% (w / w) <10
Qoyaanka,% (w / w) <6
Lead mg / kg ≤0.5
Arsenic mg / kg ≤0.5
Chromium mg / kg ≤0.5
PH (1% xal) 5-8
Tusaalooyinka dalabka ee sheyga ee warshadaha cuntada xayawaanka
1. Granular feed binder
Ku darista 1% -3% kolajka xayawaanka ee quudinta ayaa si ikhtiyaari ah u hagaajin kara saameynta granulation. Waxay ku habboon tahay quudinta biyaha, taas oo aan kaliya hagaajinaynin waxyaabaha ku jira borotiinka cayriin, laakiin sidoo kale waxay fududaysaa quudinta kalluunka iyo haleyga, hagaajinta heerka isticmaalka quudinta waxayna ka hortageysaa wasakhda biyaha.
2. Cunnada xayawaanka
Kolajka xayawaanka waxaa laga soo qaataa ilo kala duwan oo xayawaan ah waxaana loo qaybin karaa dhadhanka digaaga, dhadhanka duck, dhadhanka lo'da, iwm. Cunnooyinka fudud ee xayawaanka, waxay beddeli kartaa cuntada sida tooska ah uga samaysan digaag dhaqameed iyo hilib shimbir, waxayna sidoo kale si weyn u badbaadin kartaa qiimaha wax soo saarka; Intaa waxaa sii dheer, maadada yar ee peptide-ka ayaa ka badan 90%, taas oo sii wanaajinaysa heerka nuugista ee xayawaanka rabaayada ah.
Xirxirida iyo Kaydinta
Faahfaahinta xirxirida waxaa lagu dooran karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha. Alaabtaan waa in lagu keydiyaa bakhaar qabow, qalalan oo hawo leh. Fiiro gaar ah u yeelo qoyaan-caddeyn, cayayaan-caddeyn iyo jiir-caddeyn ayaa damaanad qaadi kara tayada xasilloon ee 24 bilood.
Hore: Warshadaha Warshadaha
Xiga: Gelatin loogu talagalay Kaabsoosha adag